Kedu igwe ịgba agba kacha mma maka iji ụlọ? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Spin bike nyocha - chọọ nyocha
Spin bike nyocha - chọọ nyocha
Kedu igwe ịgba agba kacha mma maka iji ụlọ?
Bikes Ime ụlọ kacha mma site na Ahịa:
$ 1600 na elu NordicTrack S22i Studio okirikiri Hụ ọnụahịa kachasị ọhụrụ
$ 900- $ 1600 Echelon EX3 Smart Jikọọ FitnessIgwe kwụ otu ebe Hụ Ahịa na Amazon
$ 600- $ 900 Schwinn IC3 Cygba ígwè n'ime ụlọIgwe kwụ otu ebe Hụ Ahịa na Amazon
$ 300- $ 600 Yosuda Ime ụlọ cgba ígwèIgwe kwụ otu ebe Hụ Ahịa na Amazon
Spin Bike N’isiokwu a anyị lere anya n’elu igwe ise anyị nwere maka Spin dị n’ahịa taa. Anyị mepụtara ndepụta a dabere n'echiche nke anyị, nyocha, na nyocha ndị ahịa. Mgbe anyị na-ebelata nhọrọ kachasị mma, anyị weere ogo ha, ọrụ ha na ụkpụrụ ha.
Maka ozi ndị ọzọ na emelitere ọnụahịa na ngwaahịa ndị a kpọtụrụ aha, pịa njikọ dị na igbe nkọwa dị n'okpuru. Ndị a bụ igwe ịnyịnya igwe ise kacha elu. Ngwaahịa nke ise na ndepụta anyị bụ PYHIGH.
Kedu ihe ga-adị mma karịa ịnweta igwe kwụ otu ebe nke ga-egbo mkpa nke ndị ezinụlọ gị niile? N'ụzọ dị ịtụnanya, igwe kwụ otu ebe na PYHIGH nwere atụmatụ niile na-eme nke a. Igwe igwe na-agba okirikiri PYHIGH nwere ọrụ oche nwere ike ime mgbanwe nke na-emegharị ka ọ dị elu nke mmadụ. Ogologo oche dị iche n'etiti sentimita 25 na 38.5 sentimita.
Otutu nke ohiri isi sitere na 7.87 sentimita asatọ na 10.62 sentimita, nke na-akwalite ọnọdụ ịnọ ọdụ dị jụụ.
Igwe a na-agba gburugburu nwere eriri nkwụnye ihe nwere ike idozi. Na mgbakwunye, a kwadebere ya na sistemụ eriri eriri nke, n'adịghị ka sistemụ olu, na-agbachi nkịtị. Ọ na-enye gị ezumike nke na-eme ka njem gị nwee ntụsara ahụ.
Na mgbakwunye, ọ nwere ihe atụ kachasị mma nke igwe kwụ otu ebe. Twozọ abụọ a na-agbanwe agbanwe na-edozi ma dị mma. Nhazi ahụ na-egbochi aka gị ịpụpụ na mberede, yabụ aka gị agaghị ada mbà ma ọ bụ merụọ ahụ n'oge mmega ahụ.
Ihe ndị nwere ike ịgbanyere ya na pọdle ya na-emekwa ka ịgba ịnyịnya ígwè dị mma. Na mgbakwunye, ngwungwu ya nke nwere paụnd iri atọ na ise na-abawanye arụmọrụ nke wiil na-agba igwe. Na mgbakwunye, LCD na-enyocha ọsọ, anya, oge na kalori oriri ka ị wee nwee usoro ọzụzụ dị mfe ma kwụ ọtọ.
Ọ na-nwere a gadget na kalama njide otú i nwere ihe niile ị chọrọ n'ime mfe iru mgbe na-egosipụta. Ihe a niile na - eme PYHIGH ihe igwe egwu na - enweghị atụ. Nzukọ dịkwa mma.
A na-enye ahịhịa ndị nwere akụkụ atọ, nke siri ike nke PYHIGH na-atụgharị ụkwụ. Site na ngwaọrụ ndị a ị nwere ike itinye iberibe niile n'otu oge. N'ikpeazụ, wiil ndị njem na-aga n'azụ azụ na-enyere aka ịkwaga igwe kwụ otu ebe na PYHIGH n'ụzọ dị mfe.
Uru ya bụ: * Ọ nwere igwe kwụ otu ebe nke na-arụ ọrụ site na sistemụ eriri na-akwalite ọzụzụ na-enweghị mkpọtụ. * Ọ nwere ngwaọrụ LCD nke na-enyocha calorie, ọsọ, ogologo na oge iji nyochaa njem ahụike gị. * Site na nkwụsi ike na ngbanwe dị elu iji mee ka ọ dabara maka mmadụ niile, yana * Na Ngwa na ekwentị na-etinyekwu nkasi obi mgbe ị na-emega ahụ.
Otú ọ dị, ihe ndị dị ala bụ: * Ọ na-ebu naanị kilogram 280; na * Ihe mmetụta obi na-adịghị, nke dị mkpa maka ịchụso ọrụ obi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-achọ wiilị na-agba agba nke kwesịrị ekwesị maka ndị òtù ezinụlọ niile n'emebighị ogo mgbatị ahụ, PYHIGH bụ nhọrọ kachasị mma. L NR follows ugbu a na-esote nke anọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ijidesi mgbatị obi gị ike, LOW Spin Bike D600 bụ nhọrọ kacha mma. Ọ nwere atụmatụ dị mma na njiri mara mma nke mere na ị nwere ike ịme mgbatị ahụ ụlọ gị na mgbatị ọ bụla. L Spinbike ugbu a nwere ikike nke 280 pound.
O nwere bọtịnụ na-edozi nguzogide nke wiilị. Ọ gụnyekwara ọmarịcha usoro eji arụ ọrụ belt yana 35 paụnd aluminum flywheel. Ugbo elu nwere mkpuchi akpụkpọ anụ nke na-egbochi nchara.
Tụkwasị na nke ahụ, oyi akwa nke ihe mgbochi na-eme ka flywheel ghara inwe esemokwu. Ya mere, a na-ekpochapụ mkpọtụ dị iche iche. L NN Sp Spinbike nwere isi mmiri n'okpuru sadulu nke na-etinye ujo ndị metụtara ibu.
Na mgbakwunye, a kwadebere ya oche PU dị elu. Zọ anọ nwere ike ị nweta ihu igwe PU maka nkasi obi ọzọ na njem ogologo. Ọ na-abịa na-ụzọ abụọ mgbanwe ịlesụ na a na naa na a onu.
Ọrụ ndị a niile na-eme ka mgbatị dị ụtọ ma na-atọ ụtọ. Na mgbakwunye, o nwere ihe mmetụta pulse na odometer, nke na-eme ka LOW spinning wheel bụrụ ngwugwu zuru oke. Nwere ike ilezi anya na omume gị.
Emechakwa, ugbu a maara mkpa ọ dị ịdị na-elele ọkwa gị mgbe niile. Nke a na-enye gị ihe njide ngwaọrụ maka ekwentị gị na mbadamba. Ọ na-enyekwa gị onye na-ejide kalama ka i wee nwee ike ịnye onwe gị mmiri mmiri.
Ọtụtụ ihe, ọ na-abịa na mfe ntuziaka na iga wheel na-eme ka ịmafe a spinning wheel mfe na hassle-free. Uru ya bụ: * Ngwunye elekere iri abụọ na ise dị mma maka mgbatị dị mfe na mgbatị siri ike. * A kwadebere ya na ihe odometer na ihe mmetụta pulse na-eme ka ọ bụrụ igwe eji arụ ọrụ nke ọma, yana * eriri dị larịị na-echebe ntị gị pụọ na mkpọtụ siri ike.
Agbanyeghị, enweghị njikọta Bluetooth yana enweghị ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-achọ wiilị na-agba okirikiri nwere ikike ọrụ niile dị n'ime mmefu ego, L ugbu a, wiil na-atụgharị na ime ụlọ agaghị ada mbà. Haven't chọtabeghị Spin Bike nke na-egbo mkpa gị? Nọgide na-ele anya, anyị nwere ọtụtụ maka gị.
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị na-eleta ọwa anyị, denye aha na ọwa wee pịa akara mgbịrịgba iji nweta ọkwa gbasara isiokwu anyị ndị ọzọ. Ngwaahịa nke atọ na ndepụta anyị bụ YOSUDA. Na-achọ igwe ntụgharị dị mfe nke dị mfe n’akpa? YOSUDA ​​dịịrị gị.
Agbanyeghị, YOSUDA ​​Spinbikes anaghị emebi iwu na mma. Ọ nwere ọkpọ ígwè dị arọ nke na-agbasi ike iji guzogide ịdị arọ nke 270 pound. Ngwurugwu ya nke 35-paụnd nwere ike pụtara ìhè, zuru oke maka mgbatị siri ike.
A na-ekpuchi ya na mkpuchi na-egbochi ọla nchara. YOSUDA ​​bụ ngwungwu niile na atụmatụ niile achọrọ iji nyochaa nsonaazụ nke mmega ahụ gị. LCD na-enyocha ọsọ gị, oge na calorie gị.
Mana nke ka mkpa, ọ na - agbapụta abụọ dị ka odometer. N'adịghị ka igwe kwụ otu ebe L LOW, agbanyeghị, ọ nweghị ihe mmetụta nyocha nke mkpụrụ obi. Dị ka ọ bụla ọzọ dị oké ọnụ wheel spinning, ọ na-nwere a eriri mbanye.
N'ihi ya, mgbatị gị ga-agba nkịtị ma dịkwa nro. I nwekwara ike ịgbanwe nguzogide na ịdị elu iji kwado mkpa gị. Tụkwasị na nke a, ọ nwere nnukwu paddles na-agbanwe agbanwe na ụzọ ngbanwe 2 ga-eme ka aka gị dịrị.
Ọrụ abụọ a na - egbochi gị imerụ onwe gị ahụ. 4-ụzọ smart oche imewe bụkwa uru. Ọ nwere akwa 10.24 nke anụ ọhịa ahụ na-akwado hips na obere nrụgide.
Na mgbakwunye, ichikota YOSUDA ​​Spinbike dị mfe. Ọ gụnyere otu edemede nwere ntuziaka doro anya. Ọ na-enyekwa gị karama ka ị na-ejide onwe gị mgbe ị na-emega ahụ.
Ihe ndị a niile ga-eme ka mmega ahụ gị na-atọ ụtọ. Uru ya bụ: * Ọ nwere igbe siri ike nke nwere ihe nchara na-egbochi nchara. * O nwere akwa dị warara, ụzọ anọ nwere ike idozi nke na-egbochi ahụ erughị ala nkwonkwo hip. * O nwere ezigbo ihe ngosi LCD nke na-edekọ anya, ọsọ na calorie. * Ọ na-abịa na karama na ihe njide iPad iji mee ka mgbatị gị dị mma ma na-atọ ụtọ.
Ọ ọghọm, Otú ọ dị, bụ; * Ọ naghị akwado ngwa ahụike. * Ọ bụ ezie na oche ahụ dị mma, ọnọdụ nke oche ahụ nwere ike ịbụ obere ihe ịma aka, ọkachasị maka ndị na-ebidoghi ịkwụ ọtọ ogologo oge. O sina dị, YOSUDA ​​nwere niile pụtara ìhè atụmatụ na ị ga-achọ ịnụ ụtọ na a atụ ogho igwe kwụ otu ebe.
Ngwaahịa nke abụọ na ndepụta anyị bụ Pooboo. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ọnọdụ dị iche iche mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè, igwe kwụ otu ebe bụ Pooboo bụ nhọrọ dị mma. Ọ na-abịa na a multi-ahụ mmanya na sturdy ígwè onu paddles.
Ngwongwo ndị ahụ nwere eriri edozi nke na-enyere aka igbochi mmerụ ahụ ma chekwaa mgbatị ahụ ka ọ dị mma. Pooboo Spin Bike na-enye gị pịịlị siri ike ma sie ike. Ọ dị mfe karịa YOSUDA ​​ma nwee nkasi obi karịa ịkwọ ụgbọala.
Ọ dịkwa ụda n'ihi ụda magnet. Igwe na-ebu eriri eriri na-atụnye ụtụ na akụkụ a. Yabụ ịgba ígwè anaghị enye gị isi ọwụwa maka ndị gbara gị gburugburu.
Karịsịa, ọ nwere usoro iguzogide na-adọrọ mmasị. Nwere ike iwelie ma ọ bụ belata nguzogide ahụ site na iji bọtịnụ. Otu bọtịnụ ahụ na-eme dị ka ihe mberede mberede iji mee ihe ndị na-atụghị anya ya.
Na mgbakwunye, o nwere mkpuchi breeki na-eme ka Pooboo Spinbike bụrụ ezigbo enyi maka ụmụ gị. Ọ na - enyere aka ịhapụ ihe ntụ n’uko igwe kwụ otu ebe. Mana ihe kachasị mma na wiilị a na-agba agba bụ LCD gbakọtara.
Ọ na-enyocha ọsọ, anya, calorie na ọnụọgụ obi. Dị ka ego, enwere karama na akụrụngwa akụrụngwa. Agaghịzi egbu oge mgbatị gị iji chọpụta ekwentị gị ma ọ bụ nweta mmiri.
N’ikpeazụ, igwe ịgba agba Pooboo nwere ụkwụ ụkwụ ụgbọ njem. Yabụ na ọ bụghị nnukwu nsogbu ịkwụsị. Ihe ndị dị na ya bụ: * Igwe ahụ dị magnetik, n'ihi ya ị gaghị anụ mkpọtụ ọ bụla siri ike, na-adịghị mma. * Bọtịnụ nwere ọrụ abụọ dị ka ihe na-eguzogide nguzogide na ihe mberede brek. * O nwere ihe mkpuchi breeki nke na-arụ dị ka ọta ọ kachasị maka ụmụaka, yana * Ọ nwere nyocha LCD niile.
Ọ na-enyocha obi gị, calorie, ọsọ na anya. Ihe ndị dị ala bụ: * ọ nwere LCD dị ala karịa nke na-erughị ka ọkọlọtọ ya, a na-akọkwa ịdị anya elele anya na kilomita. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ igwe dị iche, ị ga-aga maka ndị ọzọ.
Nke ahụ kwuru, na Pooboo nwere magnetik magnetik na-eme ka ọ ghara inwe ntụpọ. Ka i wee nwee ike ịnụ ụtọ ịnya ịnya ịnyịnya gị ọbụna karị! Tupu anyị enyee nọmba 1, gbaa mbọ hụ na nkọwapụta dị n’okpuru maka azụmahịa ọhụrụ na nke ọ bụla n’ime ihe ndị a. Jide n'aka na ịdenye aha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ ruo ụbọchị na ngwaahịa kachasị mma na ahịa.
Ka emechara, anyị n’elu atụ ogho igwe kwụ otu ebe bụ Anwụ na-acha Health & Fitness. Chedo ikpere gị na Sunny Health & Fitness Spinbike SF-B1709. Ihe pụrụ iche nke na-eme ka ọ dị iche na wiilị anọ ndị ọzọ na-agbagharị bụ usoro mgbatị magnetik 13 nke nwere eriri belt.
Ugbu a ị nwere ike ịnwale ụdị ike ọzụzụ dị iche iche. Ihe ọzọ kachasị mma gbasara igwe na-acha anwụ anwụ na-acha anwụ anwụ bụ igwe ndọta magnetik. Na 7.36 paụnd flywheel na-enyere aka ime ka mgbatị gị dị jụụ.
Ọ na-emekwa ka enwere ike ikpere ikpere na opekempe, n'adịghị ka wiilị na-agba wiil. Ihe a dị ịtụnanya na-eme ka ọ dị nchebe ma rụọ ọrụ nke ọma karịa wiil ndị ọzọ. The multi-handgrips na usu ihe mmetụta bụ ihe ọ bụla mma-maara ọrụ chọrọ si Spinbikes.
Zọ anọ nwere ike idozi ya na 2 inch nke jikọtara ọnụ na-enye gị ohere ịrụ ọrụ ogologo oge. Ogwe ụkwụ siri ike na eriri ndị nwere mgbatị nwere ogologo ụkwụ site na 28 sentimita asatọ na 39 sentimita asatọ. Ka ọ dị ugbu a, ihe nyocha ahụ na njikwa aka na-enyocha arụmọrụ gị.
Ọ na-edekọ ọsọ gị, ebe dị anya, ndụ gị, calorie gị na oge gị. O nwekwara ihe na-ejide kalama na wiilị ebu. Nke kachasị mkpa, ọ na-enye ikike kachasị ibu nke 300 pound.
Nke ahụ karịrị nnọọ wiil ọzọ na-agba okirikiri. Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ala stabilizers ga-enye gị obi ike zuru ezu iji zụọ ogologo oge. Ha na-eme ka wiilị na - agba ọsọ na - aga n'ihu ma wepụ ihe ọ bụla na - egbochi ọzụzụ gị.
N'ihi njirimara ndị a niile, igwe anwụ na-acha Spin na-ebute ndị ọzọ. Uru ya bụ: * Ọ nwere sistemu mgbatị ndọta 13-belt na-eme ka mgbatị dị iche iche gbasaa. * Ugbo ala nke 7.36 na-etinye obere nsogbu na ikpere. * Sensọ ụda obi na aka na-enyere gị aka inyocha obi gị, yana * Ndị na-eme ka ala na-agba gị ume ka ị gaba n'ihu n'atụmatụ mgbatị ahụ ọbụlagodi mgbe ala adịghị mma.
Ọghọm ya bụ. * Enweghị ike ijikọ ya na ngwa mmemme mmemme ndị ọzọ yana * Ọ dị oke ọnụ karịa ụkwụ ndị ọzọ na-agbagharị. Agbanyeghị, ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji usoro mmega ahụ ghari na-agbanyeghị nsogbu niile, Anwụ na-acha na Ahụike Spinbike bụ ezigbo nhọrọ.
Nke ahụ niile bụ maka ugbu a. Daalụ maka ikiri! Ọ bụrụ na anyị enyerela gị aka ọ bụla, biko pịa bọtịnụ 'Dịka' na 'Idenye aha'. Lee gị n'isiokwu ndị na-esonụ!
A ọmaatụgharị igwe kwụ otu ebenwere ike iji oge zuru ezu mega ahụ́ na obere ọrụ. Nnyocha egosila na mgbatị ịgba ịnyịnya ígwè n'ime ụlọ nkeji 40 ga-agba ihe dị ka calorie 500 ume. Mkpụrụ ume calorie nke onye ọ bụla ga-adị iche, dabere na ike na oge mgbatị ahụ.
Ntughari bu uzo di nma iji wedata ibu?
Mkpụrụ obi dị elu dị ike dị irè, rụọ ọrụ nke ọmaụzọ ọkụcalorie, na ịpịgharị ụkwụ na-enyekwa gị ọzụzụ ọzụzụ, kwa. Ma ọ bụrụ na naanị gị mmega, mgbe,na-agba ogho, ị ga-achọ itinyekwu ọzụzụ nguzogide, abụọ ma ọ bụ ugboro atọ kwa izu, ọ bụrụọnwụ ọnwụbụ ihe mgbaru ọsọ gị.Jenụwarị 13, 2014
Anyị nwere echiche na ọ bụrụ na anyị chọrọ ibu ibu, na anyị kwesịrị ịga mgbatị ahụ na Jenụwarị 1st, na-emega ahụ oge niile, ma mesịa dị gịrịgịrị. Ọ dị mma, lee ụfọdụ akụkọ ọjọọ. Agụọla m ihe karịrị ọmụmụ iri isii na nke a ma ọ bụrụ na mmega ahụ abaghị uru ọ bụla ma a bịa na ọnwụ.
Dr. Kevin Hall nke National Institute of Health mere ụfọdụ n'ime ọmụmụ ihe kachasị mkpa gbasara mmega ahụ na ọnwụ. Anyị kwesịrị nyegharịa mmega ahụ
Mmega ahụ abụghị ngwá ọrụ ibu ibu n’onwe ya, ọ magburu onwe ya maka ahụike yana ọ bụ ihe kachasị mma ị ga - eme karịa ị smokingụ sịga iji meziwanye ahụike gị. Ma echela na ọ bụ enyemaka enyemaka ọnwụ. Mmega ahụ ga - enyere gị aka ibi ogologo ndụ, ọierụ life.
Ọ bụghị ya bụ ụzọ kacha mma ị ga-esi felata. Ihe kpatara ya metutara otu aru anyi si eji ike. O nwere ike ịbụ na ị maghị, mana mmega ahụ bụ obere akụkụ nke mmefu ike gị kwa ụbọchị.
Ọ dị ụzọ atọ dị iche iche n’ahụ anyị na-eme ka calorie dị ọkụ. Nke a gụnyere metabolism izu ike gị, ya bụ, ike ole ahụ gị na-ere naanị maka ọrụ ya dị mkpa, naanị iji mee ka ị dị ndụ.
Akụkụ ọzọ nke mmefu ike bụ mmetụta na-ekpo ọkụ nke nri, nke ahụ bụkwa kpọmkwem ike achọrọ iji mebie nri n'ime ahụ gị. Akụkụ nke atọ nke mmefu ume bụ mmega ahụ. Maka ihe ka ọtụtụ n'ụmụ mmadụ, mmega ahụ - mmegharị ọ bụla ị mere bụ naanị ihe dịka pasenti 10 rue 30 nke ike gị.
Ya mere, imirikiti ike ma ọ bụ calorie ị na-esure kwa ụbọchị na-esite na metabolism gị zuru oke ma ọ bụ zuru ike, nke ị na-enweghị oke njikwa. Ọ bụ ezie na 100% nke 'calorie gị' dịịrị gị, naanị ị nwere ihe ruru 30% nke 'calorie gị' n'okpuru njikwa gị. Otu nnyocha chọpụtara na ọ bụrụ na nwoke 200-paụnd agbaa otu awa, ụbọchị 4 kwa izu maka otu ọnwa, ọ ga-efu ihe karịrị 5 pound, na-eche na ihe ọ bụla ọzọ dị otu.
Ihe ọ bụla ọzọ anaghị anọ otu! Ndị na-eme nchọpụta achọpụtala na mgbe anyị malitere ịmụba mmega ahụ anyị na-enweta kwa ụbọchị, anyị na-eme ụdị ihe omume ọ bụla na omume anyị. N’otu aka, egwuregwu na-eme ka agụụ na-agụ gị. Know mara mmetụta a: ị ga-aga klaasị na-atụgharị uche n'ụtụtụ ma agụụ na-agụ gị n'oge nri ụtụtụ na ị ga-eri nri oatmeal ugboro abụọ ka ị na-erikarị.
E nwekwara ihe akaebe na-egosi na ụfọdụ mmadụ na-ebelata mgbe ha megasịrị ahụ́. Yabụ ọ bụrụ na ị ga-aga ọsọ n'ụtụtụ, ị nwere ike ghara ịchọ ibuli elu steepụ ka ị na-arụ ọrụ. Ihe ndi a ka amara dika 'akparamaagwa ndi ozo' - uzo di iche iche anyi si eme ka oganihu mebie ozuzu anyi.
Ndị na-eme nchọpụta chọpụtakwara ihe omume a na-akpọ ụgwọ ọrụ metabolic. Mgbe ndị mmadụ bidoro felata, ike izu ike ha nwere ike belata. Ya mere ike ole ị ga - eji gbaa izu ike pere mpe.
Nke ahụ pụtara na ogwe a nwere ike ịda mbà ka ịmalitere ibu. A ka nwere ọtụtụ ihe ị ga-enyocha, mana ọmụmụ sitere na 2012 na-adọrọ mmasị. Ha banyere n'etiti savannah na Tanzania iji tụọ ike ndi otu ndi dinta aha ha bu Hadza.
Ndị a bụ ndị dị ike, ndị na-achụ nta na ndị nchịkọta. Ha anaghị anọ ụbọchị ha n’azụ kọmpụta na tebụl ha. Ihe ha chọtara jọgburu onwe ya.
Anyị chọpụtara na enweghị ọdịiche ma ọlị. Ha nwere ụdị ndụ na-arụsi ọrụ ike karị ma ghara ị burnụkwu calorie kwa ụbọchị karịa ndị okenye nọ na US na Europe. N’ụzọ ụfọdụ, ike ha mere maka mmega ahụ wee guzozie ma ọ bụ chekwaa ebe ọzọ.
Yabụ kedu ka isi nọrọ ebughibu? Don't naghị eriju afọ. Anyị nwere ike ịgbanwe calorie anyị na-ere mgbe anyị na-eme ngwa ngwa. Ọ ga-ewe ihe dị ka elekere iji gbaa Big Mac na fries ọkụ.
Ọ ga-ewe otu awa iji gbaa egwu nke ọma ma gbaa iko mmanya atọ ị ga-eri nri abalị. Otu awa nke ịgba ígwè na-agbasi ike na igwe mgbatị ahụ iji gbaa ihe ọkụ ọkụ abụọ. N'ihi nke a, a na-ele mmega ahụ anya dị ka mgbakwunye dị mma na usoro elebara anya na nri.
Mana n'agbanyeghị oke oke oke ibu na US, ụlọ ọrụ gọọmentị na-aga n'ihu na-eweta ngagharị dị ka azịza dị ka ụlọ ọrụ ndị nwere ezigbo mmasị na anyị na-aga n'ihu na-eri ma na-a drinkụ ngwaahịa ha.
Ejiri ụlọ ọrụ ọzụzụ dịka Coca-Cola site na ọzụzụ ọzụzụ kemgbe afọ 1920. Ebumnuche ebe a bụ na ị nwere ike ị drinkụ iko mmiri soda ndị ọzọ mgbe ị na-emega ahụ. Mana dịka anyị pụrụ ịhụ, ọ naghị arụ ọrụ ahụ.
Caloriessacha calorie ndị ahụ site na iko nke soda bụ n'ezie ihe siri ike. Anyị nwere nsogbu oke ibu na mba a ma anyị ekwesịghị ịgwọ mmega ahụ dị ala iji tinye ọtụtụ calorie n'ihi na ha nwekwara ọrụ. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụike ọha na eze kwesịrị ibute ụzọ maka ịkwalite ọnọdụ nri anyị iji nyere ndị mmadụ aka ịhọrọ nhọrọ ahụike karịa nri ha.
Weighttufu ibu na mmega abụghị ihe agaghị ekwe omume, ọ na-esikwu ike. Anyị ga-ahụkwa otú nke ahụ si arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị gaa mgbatị ahụ ma gbaa calorie ndị ahụ niile, ọ na-ewe ogologo oge ma tinye nnukwu mgbalị, ị nwere ike ihichapụ ihe ahụ niile na nkeji ise ị na-eri otu pizza.
The ikwu size bụ n'ezie ezi ihe ijuanya, na ọtụtụ ndị anaghị aghọtacha na.
Kedu ihe igwe eji agba okirikiri kacha mma?
10Kachasị alaMmegaSpin BikesEnyocha
Pooboo D525 Mgbatị Ime ụlọIgwe kwụ otu ebe.
Mgbatị MgbatịIgwe kwụ otu ebe(Usoro 2020)
Mgbatị ime ụlọ DMASUNIgwe kwụ otu ebe.
ATIVAFIT Ime ụlọCgba ígwè.
Joroto X2 Ime ụlọCgba ígwè.
Anwụ na-acha na Ahụike SF-B901 Pro.
Anwụ na-acha na Ahụike SF-B1203Ime ụlọOnye na-enye ọzụzụ.
Marcy Ezigbo MagIgwe kwụ otu ebe.
Gịnwere ike zụta ezigbo iheatụ ogho-ịnyeigwe kwụ otu eben'ihi na ihe dị ka $ 345 maka ewu ewu na Sunny Health ụdị. “Dị 'Ejikọtara', nke gụnyere ihuenyo na-agbasa klaasị iji rụọ ọrụ, sitere na ihe dịka $ 1,000 ruo ihe karịrị $ 2,000, gụnyere Peloton na Echelon.Ọnwa Itolu 14, 2020
Spinning na enyere aka ida abụba afọ?
Dị ka ndị ọkachamara ahụike si kwuo, ịgba ịnyịnya ígwè abụghị nanị na ọ na-eme ka obi gị nwee ume kamakwa o nwere ikikeọkụnnukwu calorie. Ime ihe omume a kwa ụbọchị gaEnyemakagịọkụkarịa calorie, nke pụtara na ị ga-enwe ikeida abụbaechekwara na ahụ gịabụba, gụnyere nke gịafọ abụba.Jun 4, 2018
1. Ọ bụ Mmetụta Ahụmịiko Cardio Na - adọrọ Mmasị - Ma Inwere Ike Ghara Burnre Dị Ka Ichere.Na-atụgharịmaara ogologo oge iji belata abụba ma nyere ndị mmadụ aka ịkwụsị pound. 'Nwuoatọugboro n'izuma ị na-ere ọkụ ruo calorie 1,800, mana paụnd abụba yiri kalori 3,500.Sep 1, 2017
Gịnị kpatara igwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ?
Ọdịdị e wuru na ihe onwunwe dị elu karịa ụdị ụlọ,ya merenke a bụ n'ozuzu ihe mere mgbatịanyịnya igwedịoke ọnụma nye ọnụahịa ka elu. Ndị a mmegaanyịnya igwedị mfe na nkwonkwo gị yana mmega ahụ ndị ọzọdị kadị ka na-agba ọsọ.
Ọ bụ ngagharị mgbatị ahụ bara uru?
Nya aanyịnya igwe kwụ otu ebebụ ụzọ dị irè ma dị irè iji gbaa calorie na abụba ahụ ume ma na-ewusi obi gị, ngụgụ, na akwara ike. Tụnyere ụfọdụ ndị ọzọ ụdị kadio akụrụngwa, aanyịnya igwena-etinye obere nchekasị na nkwonkwo gị, mana ọ ka na-enye ezigbo ikuku aerobicrụpụta.Julaị 12, 2019
Kwesịrị ịgba gburugburu kwa ụbọchị?
Ọbụna otu ugborogịachọtala gịna-agbaghariụkwụ, usoro ụbọchị kwa ụbọchị nwere ike ịbụ ihe karịrị akarị. Ma ọ bụrụgịna-achọ mgbatị ahụ dị ike ụbọchị ole na ole n'izu — ọkachasị ma ọ bụrụ na ịgba ọsọ ma ọ bụ ụdị mmega ahụ siri ike na-emebi nkwonkwo gị—na-agbagharinwere ike ịbụ ụzọ kacha mma iji mee ka obi na ahụ gị gbanwee.Eprel 17, 2017
M ga-efufu ibu na-agbagharị ugboro ise n’izu ụka?
Na-atụgharịOgologo oge mara na ọ ga-ebelataabụbama nyere ndị mmadụ aka ịwụ pound. N'ezie, ọ dị oke mma na nyocha egosipụtara dochie otu mmega ahụ siri ike na nkeji abụọ 30 nke mgbatị ahụ dị elunwere ikemma ihe niile si gị obi ike gị ahu mejupụtara.Sep 1, 2017
Ọ dị mma ịzụta igwe kwụ otu ebe?
Ebe ọ bụ na ịhazi oge, ị ga-achọ ngwa ngwa ahụike iji nyere gị aka ịrụ ọrụ na nkasi obi nke ụlọ gị. Cygba ígwè bụ ụdị mmega ahụ magburu onwe ya. Igwe ịgba agba agba dị elu nwere ogo ụlọ dị mma. Ọ na-abụkarị aghụghọ ka ịhọrọ mgbatị ahụ nwere ike ịnọnyere gị.
Ego ole ka igwe ịgba ígwè nwere ike ibu?
【SPIN igwe kwụ otu ebe】 New ọgbọ nke abụọ kwalite atụ ogho igwe kwụ otu ebe n'ụzọ zuru ezu dozie nsogbu nke oké iguzogide. 35lbs flywheel na arọ-oru ígwè etiti nke mmega bike ekwe nkwa na nkwụsi ike mgbe ịnyịnya ígwè.Ọ na-akwado ruo 330 lbs max ibu.
Kedu ụlọ ịgba agba ime ụlọ kacha mma?
Stryde 1 Schwinn Mma. 2 Anwụ na-acha Ahụ ike & nkwupụta ụda; Mgbatị Evolution Pro Indoor Spin Bike. 3 Keizer M3i Ime ụlọ Mgbapụta Ime ụlọ. 4 Pooboo Pro Ime igwe kwụ otu ebe. 5 L BOW Ugbu a Ime ụlọ Bike. 6 Sole Fitness SB700 Mgbatị Bike. Ihe ndị ọzọ